Kaddib markii ay heshiis cusub ka saxiixatay Dani Carvajal waa kee ciyaaryahanka xiga oo ay Los Blancos doonayso inay qandaraaska u kordhiso? – Gool FM
(Madrid) 29 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa heshiis cusub ka saxiixatay maanta xiddigeeda Dani Carvajal, waxaana uu daafacan qalinka ugu duugay Los Blancos qandaraas ku eg illaa sanadka 2025-ka.
Haddaba kaddib markii ay heshiis cusub ka saxiixatay Dani Carvajal, waxaa la ogaaday ciyaaryahanka xiga ee ay Los Blancos doonayso inay qandaraaska u kordhiso.
Jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain ayaa warinaysa in ciyaaryahankaasi uu yahay Karim Benzema, isla markaana uu weeraryahankan qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub qalinka ugu duugo Real Madrid.
Xiddigan reer France ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu ku eg yahay sanadka 2022-ka, laakiin Los Blancos ayaa diyaar u ah inay heshiis cusub oo hal sano ah ka saxiixato.
Benzema ayaa dhaliyey 23 gool 34 kulan oo horyaalka La Liga uu u ciyaaray Kooxda Real Madrid xilli ciyaareed la soo dhaafay.